février 2018 - Page 2 sur 83 -
Fanafihana teny Alasora : Jiolahy voasambotra niaraka tamin’ny basy vita gasy
28/02/2018 admintriatra 0
Lehilahy iray, 35 taona izay voalaza fa nanafika trano fivarotan-toaka iray teny Ambohimanandraisoa Alasora no voasambotry ny polisy niaraka tamin’ny basy vita gasy sy bala miisa efatra ny alin’ny alatsinainy lasa teo. Araka ny loharanom-baovao …Tohiny
Crématorium – Anosizato : Hodorana anio ny vata-mangatsiakan’i Tsilavina Ralaindimby
Na fatra-piaro ny kolontsaina sy ny fomba malagasy aza, dia nanana ny filôzofia nitondrany ny fiainany ihany koa i Tsilavina Ralaindimby. Anisan’ireo hafatra napetrany ny fomba atao amin’ny fahafatesany. Araka ny hafatra napetrany, dia hodorana …Tohiny
Ambanin’Ampamarinana : Mitohy ny fanaraha-maso
Herinandro mahery aty aoriana nihotsahan’ny vato be nahafatesana sy nandratrana ain’olona, teny ambanin’Ampamarinana, dia mbola mitohy ny fanaraha-maso ataon’ny Fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny Bngrc, sy fanentanana ireo mponina manodidina hifindra toerana amin’ny alalan’ny lehiben’ny fokontany, na …Tohiny
Fandrobana tany Manjakandriana : Tra-tehaka ny iray, roa tafatsoaka
Mbola karohina ny roa tamin’ireo jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana taorian’ny nahavoasambotra ny iray, tao amin’ny fokontany Iravaondriana kaominina Alarobia Ambatomanga distrikan’i Manjakandriana, izay tra-tehaka teo am-panaovana fanafihana nandritry ny fotoana tsy nahateo ny tompon-trano. Tafaporitsaka …Tohiny
Kardinaly Désiré Tsarahazana : Lamesa voalohany notarihiny ny tetsy Antanimena
Nitarika ny lamesa voalohany taorian’ny fanamasinana ny maha Kardinaly azy i Désiré Tsarahazana, omaly, tetsy amin’ny Ekar Masindahy François-Xavier, Antanimena. Tonga nanotrona izany lamesa lehibe izany ny Filoham-pirenena mivady sy ireo olo-manan-kaja maro ary ireo ...Tohiny
Taksiborosy- RN4 : Sivy voatafika